वाइडबडी प्रकरणः लेखा समितिका सभापतिले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाए ! « News24 : Premium News Channel
वाइडबडी प्रकरणः लेखा समितिका सभापतिले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाए !
काठमाडौं, ३० पुष । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाईडबडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भिर आरोप लगाउनु भएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजितए एक साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहबरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंशहरु नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाउनु भएको हो । उहाले भन्नुभयो, ‘सभापतिजीको यो कदमले आज मलाई संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नेगरि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ ।’
आयोजित उक्त साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूले पनि बल्ल–बल्ल आजमात्रै मुश्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होईन, कोही पनि ठूला नेताहरुलाई कारबाही हुँदैन् । यो प्रतिवेदन बास्तवमा रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित् भयो ।’ आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउनेपनि जानकारी दिनुभयो ।
वाईडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेतापनि दोषी रहेको उहाँको आरोप छ । यद्धपी उहाँले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरु कोहीपनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो । भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन् ।’
फरक प्रसँगमा उनले उसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाउनुभयो । मन्त्रालयले पठाएको विवारण पत्रकारहरुसामू देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन् । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गरेका हौं ।’
यादवले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन् । सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ ।’ अहिले विभागीय मन्त्री अधिकारी यो प्रकरणमा आँफै धाँमी र आँफै बोक्सी बनिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाउनुभयो ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।
फरक प्रसँगमा उहाँले दुई नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई नकुटेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सचिवले यो विषयमा मनगढन्ते कुरा गरे । मन्त्रीले उनलाई कुटेकै छैन् । सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर गालीगलौज गरेपछि विवाद भएको हो । उहाँले कुटेर भनेको लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन् ।’
यादवले सचिव झाले नाटक मञ्चन गरेकोले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेपनि बताउनुभयो । यद्धपी उनले यस प्रकरणमा छानबिन समितिले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउने पनि विश्वास दिलाए । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि मन्त्रीले कुटेको प्रमाण भेटिए, उनलाईपनि कारबाही हुन्छ ।’
वाईडबडी प्रकरणका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् :अधिकारी
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् सांसद खगराज अधिकारीले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले भ्रष्टाचारबारे सुन्य सहनसिलता अपनाएको छ । यो प्रकरणमा पनि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिले पनि काम गरिरहेको छ । दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार जरैदेखि उखल्ने अठोट लिएको सुनाउँदै उनले न्यायिक आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको सुनाउनुभयो । उहाँले भ्भनुभयो, ‘न्यायिक समितिले निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गरिरहेको छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू यो प्रकरणमा संलग्न नभएको बरु ओली र प्रचण्ड नै संलग्न छन् भनेर आरोप लगाउनुभएको छ नि भनेर सोधेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देउवाको छटपटीको आक्रोश हो । आकाशतिर थुक्दा आँफ्नै अनुहारमा थुक पर्छ ।’
उनले भ्रष्टाचारी, ठग र ढाँटहरु देशका धमिरा भएकोले यीनीहरुलाई समाप्त पार्नुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रकरणमा जत्रो नेता भएपनि कोही पनि दोषी उम्किन पाउँदैनन् ।’ उनले यो प्रकरणमा सरकारले ढाकछोप नगरेको पनि जिकिर गरे । अधिकारीले भने,‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई खोजी–खोजी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छ ।’
आफ्नो पार्टी यो प्रकरणमा मौन नभएको पनि उनले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टी बरु न्यायिक छानबिन समितिलाई प्रतिकुल असर नपरोस भनेर सचेत छ ।’ सरकारलेमात्रै नभएर सरकार, संसद तथा न्यायिक छानबिन समितिले पनि कार्यसम्पादन गर्दा जनतालाई गुमराहामा राखेर कसैको छाला बचाउने काम गर्न नहुने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
फरक प्रसँगमा उनले अनशनरत गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग पूरा भएको पनि जिकिर गर्नुभयो । उहँँले भन्नुभयो, ‘केसीले उठाएका शतप्रतिशत मागहरु पूरा भएका छन् । हामीले उहाँको सबै माग सम्बोधन गरेका छौं । उहाँले भनेकै मर्म र भावनाअनुसार विद्येयक आएको छ ।’
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता अधिकारीले केसी अहिले अनशन बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्काल अनशन स्थगित् गरेर वार्तामा आउनपनि केसीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईको भावनाविपरित विद्येयक छैन । शरिरलाई दुःख दिने काम नगर्नुहोस् ।’
वाईडबडी खरिद प्रकरणमा जोसुकै दोषी भएपनि कारबाही गर्नुपर्छः रामकृष्ण यादव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने जो कोही भएपनि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
यादवले यो प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम कसरी मुछियो आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘देउवाजीको नाम कसरी जोडियो ? मलाई थाहा छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो सभापतिको नाम छैन् । व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्नुहुँदैन् । प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
यद्धपी उहाँले यो प्रकरणमा गलत गर्ने जो कोही नेता तथा मन्त्री नै भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सरकारले समितिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।